U.e.tv wenze ezinye izinguquko, kuzothinteka i-soapie nezindaba | News24
U.e.tv wenze ezinye izinguquko, kuzothinteka i-soapie nezindaba
Cape Town – Isiteshi sakuleli sikamabonakude, u-e.tv sizokwenza izinguquko ngezikhathi okungena ngazo umdlalo waso oyi-telenovela, iBroken Vows, kanye nezindaba zakusihlwa, i-eNews Direct.
Njengengxenye yokufika komdlalo owuchungechunge noyintandokazi, iDays of Our Lives kulesi siteshi, u-e.tv wenza izinguquko ezinqala ezinhlelweni zawo ezingena ngezikhathi zakusihlwa lapho kunabantu abaningi ababukela umabonakude (prime time) kusukela ngoSepthemba nalapho iDays isizoqala ukudlala kulesi siteshi ngo-17:30.
Kwenzeke obekungalindelekile ngesikhathi lesi siteshi siphushela uhlelo lwezomculo, olungena ngoLwezihlanu i-Club 808 eshintshelwe esikhathini lapho i-tv isuke ibukwa kakhulu izingane nentsha esencane ngo-16:30 kusukuela ngoLwesihlanu mhlaka-8 Septhemba – nokuyisikhathi lapho abantu lolu hlelo olubhekiswe kubo (target audience), nokuyintsha esikhulile, bezobe bengakafiki emakhaya.
OLUNYE UDABA: U-e.tv usuphushele iClub 808 ezinhlelweni ‘zetakalani’ ngenxa yeDays
Manje lesi siteshi sesishintshe izikhathi okungena ngazo iBroken Vows kanye nezindaba (News Direct) – nokuyizinhlelo zombili ezindonsa kanzima ngesibalo sababukeli.
Kusukela ngoLwesihlanu, mhlaka-4 Septhemba, umdlalo iBroken Vows, nodidiyelwa yiClive Morris Productions, usuzosuka ku-20:00 uye ku-18:30 nalapho uzotholana khona phezulu nesizini yesithupha yomdlalo owuchungechunge ka-SABC1 obhekiswe kakhulu entsheni, i Skeem Saam.
Izindaba zolimi lwesiNgisi ezingena ngo-18:30, manje sezizongena ngo-20:00, nokuyisikhathi okungena ngaso umdlalo kamabonakude ongaconsi phansi kuleli, iGenerations - The Legacy.
Kubukeka kuzoba lukhuni satshe ukuthi iBroken Vows kanye ne-eNews Direct badonse ababukeli abaningi njengoba lezi zinhlelo bezivele zidonsa kanzima ngalezi zikhathi ezidlala ngazo njengamanje. Ngale kwalokho iningi labantu aliphuthwa yiSkeem Saam kanye neGenerations.
Lokhu kusho ukuthi u-e.tv usuzodlala ama-soapie elandelalana kusukuela ngo-17:30 (Days of Our Lives), ngo-18:30 (Broken Vows), ngo-19:00 (Rhythm City) bese kuthi ngo-19:30 kudlale iScandal.
Cape Town 11:30 AM